Waa kuma Soomaaligii taariikhda cajiibka ah ka dhigay Ingiriiska? - BBC News Somali
Waa kuma Soomaaligii taariikhda cajiibka ah ka dhigay Ingiriiska?
Dr. Cabdullaahi Guuleed ayaa taariikh cusub ka dhigay waddanka UK, kaddib markii loo doortay duqa degmada Ealing ee ku taal galbeedka magaalada London, kana mid ah degmooyinka ugu ballaaran caasimadda Britain ayna ku nool yihiin Soomaali aad u badan.
Dr. Cabdullaahi ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee Afrikaan asalkiisu yahay ee xilkaasi ka qabta degmadaas, isagoo xilkaasi ay u doorteen golaha deegaanka degmada oo ka kooban saddexda xisbi ee ugu waaweyn waddanka UK ee Labour-ka, Conservative-ka iyo Liberal-ka, inkasoo uu isagu intii uu siyaasadda ku soo jiray uu ka mid ahaa xisbiga Labour-ka.
Wareysi gaar ah oo ay BBC-du kula yeelatay xafiiskiisa ayuu Dr. Cabdullaahi wuxuu ku sheegay in doorashadiisa ay qayb ka tahay sida Soomaalida waddanka UK uga qayb noqonayso siyaasadda isagoo farta ku fiiqay in ay taasi ka dhigan tahay dadaalka dadka Soomaalida iyo kartidoodda.
Dr. Cabdullaahi Guuleed wuxuu ka mid ah noqday saddex qof oo Soomaali ah oo bishan May siyaasadda Yurub iyo Britain ka soo ifbaxay, waxayna labada xubnood oo kale ay yihiin Raakhiya Ismaaciil oo noqotay haweenaydii ugu horreysay ee Soomaali ah oo xijaaban oo duq-magaalo ka noqota UK, halka Maajid Maajid uu isna noqday Soomaaligii ugu horreeyey ee abid xubin ka noqda Baarlamaanka Yurub.
Guud ahaan 15 xubnood oo Soomaali ah ayaa ka mid ah golayaasha deegaanka ama dawldaha hoose ee gobolka UK.
Soomaali qoxootinimo ku galay Kanada oo wasiir noqday
Dr. Cabdullaahi Guuleed wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa, sanadkii 1948-kii, wuxuu waxbarashadiisa hoose iyo tan dhexe ku qaatay isla magaalada Hargeysa, waxbarashada dugsiga sare wuxuu ku dhammeeyey dugsiga sare ee Sheekh, isagoo markii dambe u wareegay magaalooyinka Marka iyo Muqdisho.
Sanadkii 1969-kii ayuu Dr. Cabdulaahi ka mid noqday toban qof oo Soomaali ah oo ku guuleystay deeq waxbarasho oo dowlada Britian ay ugu deeqday xukuumaddii Soomaaliya. Markii uu tegay UK wuxuu sii ambaqaaday waxbarashadiisa, isagoo shahaadada PHD-ga ee cilmiga baarista daawooyinka ku diyaariyay Royal Post Graduate Medical School.
Dr. Cabdullaahi wuxuu BBC-da u sheegay in sanadkii 2006-dii ay ku bidday dabeysha siyaasadda ,isagoo xisbiga Labour-ka matalaya ayuu u tartamay xubin golaha deegaanka hase yeeshee 400 oo cod ayaa lagaga guuleystay.
Sanadkii 2010 ayuu mar kale u galay loollan doorashado xubin golaha deegaanka xaafadda Acton Central ee degmada Ealing ee London waxaana mar kale looga adkaaday 100 cod.
Hase yeeshee dadaalkiisii iyo inaanu niyad jabin ayaa ka dhigay mirodhal riyadiisiii ka gadaal markii sanadkii 2014 uu noqday xubin golaha deegaanka, waxaana 700 oo cod uu ka horreeyey qofkii ugu soo dhowaa.
Dr. Cabdulaahi Guuleed sanadkii 2018-kii ayuu mar kale ku guuleystey xubnnimadii golaha deegaanka, isagoo had iyo goor yoolkiisu ahaa "Dadaalaa wuu gaaraa".
Bishan May ayaa xubnaha golaha deegaanka ee degmada Ealing ay u doorteen degmada Ealing, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu tusaale u noqdo Soomaalida ku nool Britian gaar ahaan dhalinyarada ku dhalatay ama ku kortay.